Patinopedza vhiki yevhiki, tinoda kunakidzwa nenguva yedu yemahara uye tinopa zuva kune yedu yekunakidzwa yekunakidzwa. Kana tisingade kukanganiswa nekufona, tinoda jengetere yefoni kurwisa mafoni anovhiringidza. Dzimwe nguva, hatidi kutaura nemumwe munhu, asi vanhu vanotsamwisa vanoramba vachishevedza ...
Nhare mbozha Jammer
Jammer yenharembozha inonyanya kunangana kunzvimbo dzakasiyana uko kunorambidzwa kushandiswa kwefoni, senge dzimba dzekuongorora, zvikoro, magasi, makereke, matare, maraibhurari, nzvimbo dzemisangano, dzimba dzemitambo, zvipatara, hurumende, mari, majeri, kuchengetedzwa kwevanhu. nedzimba dzemasimba dzechiuto. Kana ...
Nheyo yenhare mbozha Jammer
Iyo nharembozha jammer inonyanya kuitirwa kwese kwese kwese kwese uko kunorambidzwa kushandisa nharembozha, senge dzakasiyana dzimba dzekuongorora, zvikoro, magasi, machechi, matare, maraibhurari, nzvimbo dzemusangano, dzimba dzemitambo, zvipatara, hurumende, mari, majeri , kuchengetedzwa kwevanhu uye mauto ...
Nei GPS Jammers Yakakurumbira
ne admin pane 20-08-23
Mazuva ano, GPS jammers vari kutamba chinonyanya kukosha basa muhupenyu hwedu. Kuwanda kwenzvimbo dzinoshandiswa kuri kuwedzera. Nei GPS jammers dzakakurumbira? Kuzivikanwa kweGPS jammers kune zvakawanda zvekuita nekupararira kwekushandisa kweGPS trackers, nekuti GPS yekushandisa michina inoshandiswa zvakanyanya kutra ...